Nzira yekuita sei chisarudzo chakanaka pamusoro peInternet keyword tool kuAmazon?
Kusarudza yakarurama paIndaneti keyword tool for Amazon search optimization ibasa rakaoma chaizvo. Tichifunga kuti chigadzirwa chako SEO chiri kuitika zvikuru zvakapoteredza zvakananga-zvakadzama keyword research, ngatitei nokukurumidza kuburikidza nenyaya huru dze ecommerce optimization - kuti iwe utore chisarudzo chakanaka uye tora chisarudzo chakanaka. Uye ini handingakupi iwe mazano akakurudzira pamusoro pekunge pane imwe yerineni keyword tool kuAmazon. Ndiri kureva kuti zvinongova kwauri kuti usarudze kuti chii chichafananidza doro rako-kutumira zvinyoro zvakanakisisa kupfuura zvose - freeroll forum poker. Ingoyeuka mupfungwa pfungwa dzinotevera dzinotevera uye mazano akangodaro ndangobva kuchenesa kuburikidza nemakore mashoma apfuura mumakambani, uye iniwo mazviitiko anoshanda ane chokuita nehurukuro.
Ita Zvose Zvinonyanya kukosha zveSeO Zvichitarisira Vatereri Vari Target
Tisati tatarisana nechinhu chipi nechipi, ngatitarisei - Amazon SEO ine zvinhu zvakasiyana siyana izvo zvisingaiti kuti zviite nenzira yakafanana neyekutsvaga kutsvaga paIndaneti pamwe neGoogle. Zvakatorwa muzvizhinji, nheyo huru yehutano ndeyokuti Amazon kugadziridza ndeyekuwedzera zvakanyanya uye zvakajeka kuita, iyo iri kutengesa kunyanya pamusoro wekutengesa kwezvinoshandiswa zve shopper uye zvakanyanya mhando yezvinyorwa zvinyorwa zvakanyatsotarisirwa zvichitarisira kune vangave vatengi.
Ziva Shopper Intentions kuAmazi
Kugadzira urongwa hukuru hwekufanirwa-kukunda mazwi ekukosha hakusi zvakaoma sezvamungafunga. Ichokwadi, hapana chikonzero chokukurumidza kuedza kuwana yako yekupedzisira-rega muInternet keyword tool kuAmazon. Ndinoreva kuti iwe unofanirwa kutanga zvidzidzo zvako zvakadzama uchishandisa zvinyorwa zvepamusoro, semuenzaniso, kuti wakaisvonaka Google Keyword Planner. Kunyanya, izvozvo zvingava chikwata chakakura kuti iwe uwane mufananidzo wakazara wezvose zvakasanangana mazwi ekutsvaga uye izwi guru shopper rauchavimba naro.
Tevedzerai Maitiro Akawanda eAmazon Content SEO
Pano ndipo paunoda kutora chisarudzo chako chekupedzisira chekutsinhanisa keyword tool kuAmazon. Zvakare - Handisi kuzokupa mvumo yakananga kana kuratidzira chero sarudzo dzega. Ingotarisa paGoogle nokuda kwechigadzirwa chakakurumbira uye chinoshandiswa-chinoshandiswa nevaridzi mhinduro - uye wapedza. Chinhu chacho ndechekuti kune zvakawanda zvakasiyana-siyana zvinowanikwa (kana zviri mukana wakazaruka, kana nekubhadharwa kubhadhara) kuti iwe uende nehutano hwakananga ecommerce keyword research. Ita zvinyoronyoro, dzimwe nguva zvakawanda zvingakwanisa kukunda mazwi ekutsvaga kana kutsvaga mutsara yekutsvaga mitsara yaunayo mutsamba yako huru-iri kungokundikana kuita kuti hurumende yako iwane mararamiro (asingatauri kufambira mberi kwako kunotarirwa kusvika kumazinga akanaka ekutendeuka).
Ita Kusiyanisa pakati pemhando dzemashoko
Usatora nguva yako mukutsvakurudza yose yakawanda yevimbiso yekutsvaga mutsva.Yeuka - tsvimbo idzi dzinokwevera pamwe mazwi akawanda nemashoko zvinowanzove neanowanikwa pasi pe keyword competition. Nokudaro, kutenga mari yako nguva yekuwana mhando yekutsvaga kushamwaridzana ichiri kuongororwa nevashamwaridzana vako vari pedyo - ndicho chinhu chikuru chekutsvaga kwako muAmerica. Mushure mezvose, hedu ingongova imwe chete inotonhora - inenge 70% yeAsia mazvigadzirwa zvinoshandiswa zvinouya kuuya zvikurukuru kuburikidza nemakore ekutsvaga kutsvaga mibvunzo. Zvinoreva kuti nguva yako uye simba rako rinoshandiswa pamusoro apo richagara richibhadhara, zvirokwazvo.